Afhayeen u hadlay Milliterga DFS ayaa sheegay inay keenayaan is bedel | maakhir.com
Afhayeen u hadlay Milliterga DFS ayaa sheegay inay keenayaan is bedel
Muqdisho:-Afhayeen u hadlay ciidamada militariga ee dowladda KMG ah ee Somalia Gaashaanle SareC/qaadirMacalin Nuur ayaa magaalada Muqdisho ka sheegay in ciidamadoodu ay toogan doonaan sarkaalkii ay ku arkaan inuu bililiqeysanayo ama waxyeello u geysanayo dadka shacabka, Afhayeenkaasi ayaa sheegay inay jiraan ciidamo badan oo falalka noocaasi ah ku kaca,balse haatan talaabo cad laga qaadayo.
Afhayeenka Militeriga Somalia oo hadalkan maanta ku sheegay wareysi uu siiyay BBC, ayaa sheegay inay isku dayi doonaan sidii ay ku soo ceshan lahaayeen kalsoonidii shacabka, oo uu sheegya inay shacabka iyo Dawladu aad ukala fogyihiin markaa eegto dhanka wada shaqayn la”aanta.
C/qaadir Macalin Nuur waxa uu sheegay in aanay marnaba u dulqaadan doonin askari shacabka wax u geysanaya ama boobaya hantida dadka, isagoo intaa raaciyay inay isbeddel ku sameyn doonaan hawlaha ay hayaan.
Afhayeenkaasi waxa uu rajo fiican ka muujiyay qaabka ay hadeer wax u socdaan oo uu sheegay in Amaanka Caasimada Muqdisho ka soo raynayo,marka loo eego xiliyo badan oo tegay oo ay Muqdisho ahayd meel ay ka dhacaan dilal is daba joog ah.
Hadalka Masuulkaasi u hadalay Ciidamada Miilteriga Dawlada Somaliya ayaa ku soo aadaya xili ay Caasimada Somaliya ee Muqdisho xaaladeedu tahay mid karin oo ay had iyo jeer dhacaan Dagaalo aan kala joogsi lahayn.
« Madaxwayne Xigeenka Puntland ayaa qabtay Shir Jaraa”id
Uuruka Saxafiyiinta Caalamiga ee IFJ oo dowlada ugu Baaqay in ay wax ka badalaan Sharaciga lagu dhaqo Saxaafada »